Muraayadaha Google ee loogu talagalay Android waa la cusboonaysiiyay, hadda aad bay uga dhakhso badan yihiin oo ula yaabban yihiin | Androidsis
Google waxay hadda ku wargelisay boggeeda rasmiga ah taleefannada gacanta waxay cusbooneysiineysaa barnaamijkeeda loo yaqaan Google Goggles ee loogu talagalay android iyo iPhone. Codsigan oo naga caawiya inaan ku baarno walxaha iyada oo loo marayo kamaradda casriga ah, barcodes, QR codes, ama xitaa shey kasta oo aan ka helno macluumaadka ku saabsan iskaanku wuxuu gaarayaa nooca 1.3 sidan.
Horumarinta aan ka heli karno cusbooneysiintan waa dhowr, sida iskaanka barcode dhakhsaha badan, awoodda lagu aqoonsado xayeysiiska daabacan ee joornaalada ama joornaalada, iyo waxyaabo yar oo la xiriira xujooyinka sudoku. Haa, waa ciyaar maskaxeed aad u moodo maalmahan.
1 Google Goggles wuxuu hagaajiyaa baarista nambarka barcode
2 Google Goggles ayaa baaraya xayeysiisyada daabacan ee joornaalada iyo joornaalada.
3 Google Goggles wuxuu xaliyaa Sudokus-ka ku xiiqay
Google Goggles wuxuu hagaajiyaa baarista nambarka barcode
Hadda Goggles Google Waxay awood u leedahay inay baarto barcode isla markiiba, marka terminalku dhammaado wuu gariiri doonaa oo soo bandhigi doonaa natiijooyinka iyada oo aan loo baahnayn inaad riixdo badhan ama ikhtiyaar ku yaal barta. Hadda waxaan dooranay macluumaadka aan dooneyno inaan kala tashanno koodhka la marsiiyey.
Google Goggles ayaa baaraya xayeysiisyada daabacan ee joornaalada iyo joornaalada.
Ikhtiyaar cusub ayaa hadda ku jira Google Goggles for Android, wuxuu awood u leeyahay inuu iskaanto xayeysiinta joornaal kasta ama joornaal kasta oo uu na tuso macluumaad la xiriira astaanta ama badeecada, oo ay ku jiraan marin u lahaanshaha soo saaraha, astaanta ama bogga dukaanka. Doorashadan waxaa hadda loo heli karaa oo keliya xayeysiiska saxaafadda Mareykanka iyo xayeysiimaha daabacan laga bilaabo Ogosto 2010 iyo wixii ka dambeeya.
Google Goggles wuxuu xaliyaa Sudokus-ka ku xiiqay
Waxaan u maleyneynaa in shaqadan cusub ee ugu dambeysay ay sabab u tahay caajisnimada qeybta injineerada Google. Google Goggles for Android hadda wuxuu awoodaa inuu xalliyo halxiraalaha sudoku mar haddii la marsiiyo. Waxyaabaha hiwaayadda ah ee naga hor imanaya dhib maahan haddaan leenahay terminaal Android ah ama iPhone leh Google Goggles oo gacanta lagu rakibay.
Goggles Google waxaa laga soo dejisan karaa Suuqa Android.
Google Goggles for Android ee AppBrain
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Google Goggles for Android waa la cusbooneysiiyay, hadda aad ayuu u dhakhso badan yahay oo lala yaabay
Cajiib ah !!! Waxaan isku dayay shayga sudoku in yar ka hor oo si fiican ayuu u xaliyaa, dhowr ilbiriqsiyo gudahood, sida fiidiyowga. Berri waxaan ka tegayaa qof jabaqsan, oo sidaas ayaan uga soo tagay markaan tusay tarjumaadda anigoo sawir ka qaadaya qoraalka.
10 loogu talagalay Google Goggles!
Hagaag, waan cusboonaysiiyay, waxaan baaray dhowr xujooyin Sudoku mana xallin karto hal ... waxay si fudud u qirtay inay tahay, waa xujooyin Sudoku waxayna raadineysaa macluumaad shabakadda.
Ka jawaab Aesptux
Sidoo kale Aesptux ma sameeyo, waxay u aqoonsan tahay inay yihiin sudoku laakiin ma helayo badhanka xalka sida fiidiyowga.
Muraayadaha indhaha waxaan ku badali karaa waxa Barcode Scanner sameeyo, sax?
Ka jawaab wendigo
Wanaagsan, ma awoodo inaan ka helo suuqa dhexdiisa oo aan akhriyo APPBraim QR sidoo kale.
Ma i caawin kartaa? Mahadsanid
Ka jawaab sheko
kaliya ku qor Google Goggles suuqa
Ka jawaab hercules
Waad salaaman tahay waxaan haystaa nin cusub n2 mana ii oggolaan doono inaan rakibo barnaamijka muraayadaha indhaha ee google, wuxuu leeyahay kuma haboona taleefankan. Ma jiraa qof garanaya waxa ay tahay inaan sameeyo? Mahadsanid.
Macluumaad ahaan, waxaan kuu sheegayaa inaan horey u lahaa akoon google ah.
Ka jawaab juancg